China ALF-3 Aseptic Filling and Closing Machine (Vial for Vial) ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |ညှိထားသည်။
ALF-3 ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းစက် (ပုလင်းများအတွက်)
ပိုးသတ်ဆေးအဖြည့်နှင့်အပိတ်စက်သည် ဖန်ပုလင်းများ၊ ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုဖြင့် ဖန်ပုလင်းများကို ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းသည် ပိုးမွှားဧရိယာများ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသောအခန်းများတွင် အရည်၊ semisolid နှင့် အမှုန့်ထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
■ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အနုမြူနှင့် လျှပ်စစ်စနစ်များမှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်စေခြင်း၊
■ “No Bottle – No Fill” နှင့် “No Stopper – No Cap” ၏ ဘေးကင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်၊ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
■ Torque screw-capping ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
■ အစက်အပြောက်ကင်းသော ဖြည့်သွင်းမှု၊ မြင့်မားသော ဖြည့်စွက်တိကျမှု၊
■လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘေးကင်းမှု၊
အထွက် 0-60 ပုလင်း/မိနစ်
ဤစက်သည် ပုလင်းများအတွက် အဖြည့်ခံ၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် အဖုံးအုပ်စက်ဖြစ်သည်။ဤစက်သည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကြာရှည်သော အပိတ်ကင်မရာအညွှန်းကိန်းစခန်းကို လက်ခံပါသည်။အညွှန်းကိန်းသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါ။
ဤစက်သည် မရှိမဖြစ်ဆီများကဲ့သို့သော သေးငယ်သောအရည်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ပလပ်ထိုးခြင်းနှင့် ဝက်အူလှည့်ခြင်း (လှိမ့်ခြင်း) အတွက် သင့်လျော်သည်။အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သိပ္ပံသုတေသနနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ဤစက်ကို စက်တစ်ခုတည်းအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရုံသာမက ပုလင်းလျှော်စက်၊ အခြောက်ခံစက်နှင့် အခြားစက်ကိရိယာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။GMP လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပါ။
Vial Bottle Filling Machine ၏အင်္ဂါရပ်များ
1. Man-machine interface ဆက်တင်၊ အလိုလိုသိပြီး အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ PLC ထိန်းချုပ်မှု။
2. ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း ထိန်းချုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်းကို မထင်သလို ချိန်ညှိမှု၊ အလိုအလျောက် ရေတွက်ခြင်း။
3. အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပုလင်းမပါဘဲအဖြည့်မခံပါ။
4. Disc positioning ဖြည့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း။
5. တိကျသော ကင်မရာအညွှန်းကိန်း ထိန်းချုပ်မှု။
6. ၎င်းကို GMP လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် SUS304 နှင့် 316L သံမဏိများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အရည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်၊ ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် ဗိုင်းလိပ်တံတစ်ခု၊ ပုလင်းထဲသို့ auger ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ အပ်ထိုးယန္တရား၊ အဖြည့်ယန္တရား၊ rotary valve၊ ပုလင်းကို ထုတ်လွှတ်သော auger နှင့် capping station တို့ဖြစ်သည်။
1. ဆေးပုလင်းများကို အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပြီး ဒီဇိုင်းအမြန်နှုန်းသည် ပုလင်း/မိနစ် 600 သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. ဖြည့်စွက်ဆေးထိုးအပ်သည် ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းအတွက် အပြန်အလှန်ခြေရာခံခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပုလင်း၏ရွေ့လျားမှုအခြေအနေအောက်တွင် ဆို့ပါကို နှိပ်ပါ။
3. ၎င်းကို သတ်မှတ်ချက်များ အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချနိုင်ပြီး ဖြည့်သွင်းသည့် ပမာဏ၊ ဆေးထိုးအပ်၏ အမြင့်နှင့် ပုလင်းအမျိုးမျိုး၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်းကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပုလင်းမရှိသော အဖြည့်ခံနှင့် ပုလင်းဆို့မရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ။
5. ထုတ်လုပ်မှုဒေတာနှင့် ထုတ်ကုန်ဒေတာကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုဖော်မြူလာဒေတာကို ပြုပြင်နိုင်သည်။
ယခင်- ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းစက် (မျက်လုံးစက်အတွက်)၊ YHG-100 စီးရီး
နောက်တစ်ခု: အရည်ဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးအုပ်စက်
Bottle Unscrambler၊ GLP စီးရီး
အလိုအလျောက် အရည်ကြည်ဖု ထုပ်ပိုးစက်
In-Line Capper၊ SGP စီးရီး